“Raharaha Kidnapping” : karohina fatratra i Stephanie, vehivavy anisan’ny atidoha | NewsMada
“Raharaha Kidnapping” : karohina fatratra i Stephanie, vehivavy anisan’ny atidoha
“Wanted” i Stephanie, vehivavy iray anisan’ny atidoha amin’ny “Raharaha fakana an-keriny an’i Arnaud”. Vao nivoaka ny fonja izy io ny taon-dasa ary izao anisan’ny niketrika ny kidnapping tao Toamasina izao.
“Maro ny anaran’olona navoakan’i Lejao nandritra ny famotorana azy. Anisan’izany ny olona efa mifonja kanefa mbola mivoaka manao asa ratsy ihany. Misy vehivavy amin’ireo ary misy miverimberina hatrany ny anarany”, hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny polisin’ny BC Anosy, ny kaomisera Andrianirina Alain Bruno, omaly. Voalaza anarana amin’izany i Roger Lala Stephanie, izay voatonona foana izy io tamin’ny “Raharaha fakana an-keriny” maromaro teto amintsika. Anisan’izany ny fakana an-keriny an’i Arnaud farany teo. “Karohina fatratra izy io amin’izao fotoana izao, ary efa mivoaka ny taratasy manambara ny fikarohana azy. Efa naiditra am-ponja izy noho ny resaka fakana an-keriny, asan-jiolahy tao Toamasina tao, efa hatramin’ny toana 2010, saingy efa nivoaka ny fonja ny faramparan’ny taon-dasa iny. “Mpamerin-keloka avokoa ireo olona tafiditra amin’ity fakana an-keriny ity. Ny mahagaga anefa, vetivety ihany dia mivoaka izy ireo. Fanapahan-kevitry ny fitsarana izany…”, hoy ny polisy. Ankoatra an’i Stephanie, maromaro ihany koa no mbola karohina, ary efa mivoaka ny taratasy fahafahana mikaroka azy ireo. Aparitaka amin’ny toerana maro sy ny biraon’ny mpitandro filaminana manerana ny Nosy ireo, ary azon’ny olona atao ihany koa ny miantso ny polisy raha manam-baovao.
Fredo no atidoha
Araka ny fanadihadiana nataon’ny polisy tamin’i Lejao ihany no nahalalana fa atidoha mpitarika azy ireo amin’ny fanatanterahana ny fakana an-keriny i Fredo. “Misy ny lehibe mpaniraka ireo jiolahy, fa no mpitarika ireo olon-dratsy i Fredo izay efa mpikarama an’ady avokoa”, hoy ny fanamafisana. I Fredo ilay maty voatifitry ny polisy ka nahabe resaka hoe niniana novonoina. “Jiolahy raindahiny ary nitifitra ny polisy izy io, ka tsy maintsy niaro tena izahay. Tsy izy io irery no ahazoana ny tena lehiben’ny fakana an-keriny fa maro ny anarana efa azo”, hoy ihany ny polisy. Momba ilay mpitsara nalain’ny BC tany Toamasina kosa, nilaza ny polisy fa iraka no nampanaovina azy ireo, ary tsy afaka manao fanadihadiana mpitsara izy ireo. Ity farany izay natao fanadihadiana lalina teny Anosy ihany koa omaly, saingy tsy nahazoam-baovao izany na kely aza.